Habka Injineerka ee ku jira Android: Waa maxay iyo sida loo helo | Androidsis
Habka injineer ee ku saabsan Android: Waa maxay iyo sida loo helo
Telefoonada Android waxay leeyihiin habab badan iyo shaqooyin, kuwaas oo xaalado badan qarsoon. Tani waa wax aan ogaan karno mahadsanidiin sirta sirta ah taasi waxay ku jirtaa nidaamka qalliinka. Waa wax in sidoo kale lagu tiriyaa qaabka injineer nidaamka qalliinka. Waxaa jiri kara qaar idinka mid ah oo wax badan ka ogaada qaabkan, laakiin waa wax yar oo la yaqaan.
Sidaa darteed, hoosta ayaan kuu sheegeynaa oo dhan oo ku saabsan habka injineer ee ku saabsan Android. Marka waad ogtahay waxa ay tahay iyo sida aan ku heli karno. Maaddaama ay tahay wax si weyn waxtar ugu yeelan kara taleefankeenna, waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido badan.
1 Waa maxay qaabka injineerku
2 Maxaan ku qaban karnaa qaabkan
3 Sida loo helo habka injineerka ee Android
3.1 Habka Injineerka MTK
3.2 Nambarrada sirta ah
Waa maxay qaabka injineerku
Habka injineerku waa menu qarsoon in aan ka helno telefoonada Android. Maaha mid lamid ah qaabka soo-saaraha, laakiin waxay noo oggolaaneysaa inaan helno macluumaadka ku saabsan qalabka taleefannada iyo sidoo kale wax ka beddelno goobo cayiman oo horay loogu sii cayimay qalabka. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa tijaabooyin shaqeynaya oo loogu talagalay qaybaha kala duwan, oo waxaad ogaan kartaa in wax waliba shaqeynayaan.
Habka injineerka ku jira Android waa mid waxtar badan leh, sidaas darteed waxay ku habboonaan kartaa dadka isticmaala nidaamka qalliinka inay helaan qaabkan. Intaas waxaa sii dheer, waa wax ku tiirsan taleefan kasta, maahan in moodooyinka oo dhami ay helaan qaabkan. Laakiin waa muhiim in la ogaado.
Sida loo bilaabo qaab amaan ah taleefanka Huawei
Maxaan ku qaban karnaa qaabkan
Habka injineerka ee ku jira Android wuxuu na siinayaa marin u helida shaqooyin badan, taas oo kuu oggolaan doonta inaad wax ka beddesho dhinacyada qaarkood ee taleefanka. Qaar ka mid ah howlaha aan ku isticmaali karno qaabkan waa kuwan soo socda:
Diiwaangeli macluumaadka IMEI: Caadi ahaan, taleefankaagu wuxuu leeyahay lambar IMEI ah, laakiin haddii aadan lahayn, ma awoodi doontid inaad adeegsato kaarka SIM. Sidaa darteed, waa muhiim in la helo shaqadan.
Habee kamaradda: Wax ka beddel qiyamka caadiga ah ee codsigan ama marin u habeynta horumarsan.
Habee Bluetooth: Mar labaad, waxay kuu ogolaaneysaa inaad wax ka beddesho qiimaha caadiga ah oo aad marin u hesho goobahooda horumarsan.
Beddel cinwaanka MAC: Haddii lagaa xayiray shabakad WiFi ah, habka injineernimada ee Android wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beddesho cinwaanka MAC oo aad marin u hesho shabakaddaas mar kale.
Ogow xaaladda batteriga: Waxaan badanaa isticmaalnaa codsiyada si aan u helno macluumaadkan, laakiin waxaan ku heli karnaa mahadsanidiin qaabkan taleefanka. Waxay noo ogolaaneysaa inaan ogaano xogta ku saabsan heerkulkaaga, caafimaadkaaga ama wareegyadaada.
Kordhi kala duwanaanta WiFi-gaaga: Habka Injineerku wuxuu siinayaa marin u helida goobaha horumarsan ee WiFi ee taleefankaaga, kaasoo kuu oggolaanaya inaad dhisto xiriir xasilan
Kordhi mugga: Haddii mugga ugu badan ee taleefanka uusan kugu filnayn, waad kordhin kartaa in ka badan inta ugu badan adoo adeegsanaya qaabkan taleefankaaga.
Maareynta processor-ka: Kuu ogolaanayaa inaad xakamayso dhinacyada qaarkood oo tixraacaya processor-ka taleefanka
Sidaa darteed, sida aad arki karto, qaabkani waxay noqon kartaa aalad aad u faa'iido badan taleefanka. Maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan beddelno dhinacyo gaar ah, oo aan caadi ahaan u helin, ama aan u adeegsanno codsiyada.
Sida loo helo habka injineerka ee Android
Haddii aan horey u ogaanay waxa qaabkani noo oggol yahay inaan sameyno, waxaa jiri doona isticmaaleyaal xiiseynaya inay adeegsadaan shaqadan taleefannadooda. Guud ahaan waxaan haynaa laba wado oo aan ku heli karno macluumaadkan taleefanka. Dhinaca mid, waxaa suurtagal ah in lagu galo koodhadhka qalabka, kuwaas oo ku kala duwan hadba nooca ay ku xiran tahay Android. Laakiin sidoo kale waxaan haynaa codsi na siinaya helitaanka qaabkan injineer ee taleefanka. Waxaan kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan labadan xulasho:
Sida looga kiciyo xulashooyinka horumariyaha Google Play
Habka Injineerka MTK
Haddii aad ku rakibtid codsigan taleefankaaga, waxaad marin u heli doontaa habka injineernimada ee 'Android'. Habkani guud ahaan si fiican buu u shaqeeyaa, gaar ahaan taleefannada leh processor-ka MediaTek. Marka waa qaab aad u fudud in la isticmaalo, dalabku waa lacag la'aan mana aha inaan wax lacag ah ku bixino wax kasta oo aan ku isticmaalno.
Nambarrada sirta ah
Dhinaca kale, hab sidoo kale waxaan u adeegsan karnaa kiisaskan waa inaan ku isticmaalno lambar taleefanka ah, taas oo naga siin doonta marin u helka habka injineerka ee ku saabsan Android. Tallaabooyinka ama lambarradu way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay astaanta taleefanka. Sidaas awgeed waxaan ku tusinaynaa habka xaalad kasta, iyadoo kuxiran nooca aad leedahay:
Samsung: Ku qor lambarka * # 0011 # barnaamijka taleefanka, ka dibna riix batoonka midigta sare oo guji Furaha Furaha. Kadib adeegso nambarka Q0
Xiaomi: Gali nambarka kujira barnaamijka taleefanka * # * 6484 * # * waxaadna ku qortaa liistada soo socota lambarkan * # * # 64663 # * # *
Huawei: Xaaladdan oo kale waa inaan u isticmaalnaa koodh arjiga taleefanka, kaas oo noqon doona: * # * # 2846579 # * # *
Sony: Si aad u hesho habka injineerka waa inaad ku qortaa lambarkan barnaamijka taleefankaaga: * # * # 7378423 # * # *
OnePlus: Si aad uhesho fursadaha horumarsan ee kiiskan, waa inaad isticmaashaa lambarka * # 36446337 #
OPPO: Nooca Shiinaha waa inaad isticmaashaa lambarkan: * # 36446337 #
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Habka injineer ee ku saabsan Android: Waa maxay iyo sida loo helo
Mahadsanid, laakiin kama shaqeyneyso Huawei G628
Tani waa sharraxaadda Meizu 16s Pro, calanka soo socda ee Snapdragon 855 Plus